Jaaliyada Puntland ee wadamada Yurub oo taageeray nidaamka asxaabta badan ee Puntland. (Dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 18, 2012 1:58 g 0
Swden Oct 18-Jaaliyada Puntland ee ku dhaqan wadanka Sweden ayaa maanta shirku yeeshay magaalada Gotenbeg ee wadanka Sweden.
shirkan oo uu soo qaban qaabiyey urur siyaasadeed dhowaan lagu dhawaaqay oo lagu magacaabo Puntland Social Democracy Party ayaa looga hadlay nidaamka asxaabta badan ee Puntland.
General yuusuf Caabudwaaq oo kamid ah urur siyaasadeedka qaban qaabiyey shirka oo u waramay Radio Daljir ayaa ka digey in la carqaladeeyo nidaamka asxaabta badan ee Puntland u talowday.
Wuxuu sheegay Gen: Caabudwaaq in loo baahan yahay doorasho xor ah oo ku timaada nidaamka Asxaabta badan “, Waxaan maqlaynaa dad meelahaas ka hadlaya oo leh maalin lagu dari maayo Maalin waa lagu darayaa oo sanad baa lagu daray, inta la gaarayo doorasho xisbiyo ah Faroole waa fadhinayaa cidii rabta inay tartanto xisbi ha farato” ayuu yiri General Caabduwaaq.
Baarlamaanka Soomaaaliya oo loo qaybiyay miisaaniyadda dowladda ay ku shaqayn doonto